Kwuo ụdị chaja ikuku ikuku na MFi asambodo SW16 (atụmatụ)
Chaja ikuku 3-in-1 na-eguzo maka chaja ngwa ngwa Qi-Enabled Phones,Galaxy Watch,Galaxy Buds n'otu oge, ọ dịghị mkpa ichegbu onwe gị banyere eriri chaja dị iche iche na ndụ gị, na-eme ka tebụl gị dị mma ma dị mma!
Kwuo ụdị chaja ikuku ikuku na MFi na MFM asambodo SW15 (Atụmatụ)
Ọ bụ chaja ikuku multifunction maka iPhone 12, TWS na iWatch. Enwere ọtụtụ nchekwa, dịka ọmụmaatụ, nchebe n'elu ugbu a, nchekwa voltaji, oke okpomọkụ na ọrụ nchọpụta anụ ahụ mba ọzọ, ọ nwere ike igbochi mmebi batrị akụrụngwa site na ịchaji.
Kwuo ụdị chaja ikuku ikuku na MFM asambodo SW14 (atụmatụ)
Ebe chaja ikuku 2-in-1 na-eji teknụzụ njikwa akpaaka kachasị elu. Ejiri ya na ọrụ dị iche iche, dị ka ihe na-emebiga ihe ókè, oke ọkụ, oke ọkụ, oke ọkụ, wdg na ọrụ nchịkwa okpomọkụ, gbanyụọ akpaaka, ihe ndị mba ọzọ na njirimara ihe igwe, wdg. Ya mere ị nwere ike ịnweta chaja ikuku na udo zuru oke.
Kwuo ụdị chaja ikuku ikuku na MFi na MFM gbaara SW12 (atụmatụ)
Kwuo ụdị chaja ikuku ikuku nwere MFi asambodo DW08 (atụmatụ)
Ọ bụ chaja ikuku 3-in-1 dakọtara na ekwentị QI / ntị ntị TWS / iWatch. Ọ nwere eriri igwe okpukpu abụọ, enweghị ntụpọ kpuru maka ntinye, ka ndị mmadụ wee lelee ekwentị ahụ n'ihu ma ọ bụ kwụ ọtọ.
Ụdị chaja ikuku ikuku na desktọpụ nwere akwụkwọ ikike MFi DW06 (atụmatụ)
Ihe ngosi ngwaahịa: Teknụzụ Nchaji ngwa ngwa OEM / ODM Kpọtụrụ ugbu a
123456 Ọzọ > >> Peeji nke 1/8